Dagaalka Nagorno-Karabakh: Gantaallo Lagu Garaacay Magaalada Azeri Oo Lagu Dilay 21 Qof Oo Rayad Ah
Thursday October 29, 2020 - 09:05:45 in Wararka by Burco Office 2
Azerbaijan ayaa ciidamada Armeniya ku eedeysay iney dileen 21 qof oo rayad ah kaddib marki ay deegaan ka mid ah gobolka Nagorno-Karabakh ay gantaallo ku garaaceen.
Tobaneeyo kale ayaa la sheegayaa duqeyntaasi iney ku dhaawacmeen duqeynta lala beegsaday Azeri ee magaalada Barda, inta uu dagaalka socday.
Armenia ayaa eeddaasi gaashaanka u daruurtay weerarkaasi iyada oo sheegtay ciidamada Azerbaijan ay beegsadeen isbitaal ay haweenku ku umulaan.
Dagaalka gobolka Nagorno-Karabakh ka socda ayaa qarxay 27-ka bisha September.
Dhulka buuraleyda uu dagaalka ka socda ayaa heer caalami looga aqoonsan yahay inuu hoos tago Azerbaijan balse waxaa gacanta ku haya qowmiyado Armenia ka soo jeedo.
Duqeymaha ugu dambeeyey maxaa dhacay?
Afahyeenka madaxweynaha Azerbaijan Hikmet Hajiyev wuxuu sheegay xoogagga Armenia "iney adeegsadeen bam halis ah si ay dadka rayadka ee ku nool magaaada Barda ee ku taalla bartaha Azerbaijan ay waxyeello badan uga soo gaaraan."
Sawir baraha bulshada lagu baahiyey ayaa muujinaya waxyeellada duqeynta ugu dambeysay ka dhalatay sida jir dad oo googo'an iyo gaadiid gubtay iyo waddooyin burbursan.
Haweeney ku nool deegaankaasi oo lagu magacaabo Ulviyya Babayeva waxay sheegtay meel aan ka fogeen iney ku dhaceen seddex gantaal kaddibna ay goobti ka carartay oo ay raadsatay meel gabbaad ah.
"Waxaan aragnay dab iyo bam iska soo daba dhacaya," ayey tiri mar ay BBC u warrameysay.
"Hal gantaal wuxuu ku habsaday gaadhi hortaagnaa bangi, kaddibna waxaa meel walba lagu arkayey firirka bamka, burburka gadiidka iyo muraayado jajaban... bamkuna wuxuu ku dhacay xaruun dab-damis halkaasi oo uu bamku ka geystay dhimasha iyo dhaawac."
Wasaaradda arrimaha dibadda Azerbaijan waxay sheegtay askar boolis ah iyo shaqaalaha kale ee dab-damiska uu qaraxaasi dhaawaca ka soo gaaray waxaa loo qaaday isbitaalka magaalada Barda si dhaawacyadooda looga dabiibo.
Wasaaraddu waxay intaasi ku dartay duqeyntan ugu dambeysay iney ahayd mid ku xad gudubtay shuruucda caalamiga ee u yaallay arrimaha bani-aadaminimada iyo iney dowladda Armenia ay mas'uuliyaddaasi qaadato.
Dhinaca kalana mas'uuliyiinta gobolka Nagorno-Karabakh ayaa sheegay xoogagga Azerbaijan iney duqeeyeen isbitaal ay ku umulaan hooyooyinka iyo adeegya kale oo aasaasi ah oo ku yaallay magaalada Stepanakert.
Warbaahinta Azerbaijan waxay sheegeen howlgal gaar ah oo Talaadadi la fuliyey in lagu dilay taliyaha ciidamada Nagorno-Karabakh, Jalal Harutyunyan.
Wasiirka Gaashaan dhigga Azerbaijan Mr Harutyunyan, waxay diidday iney ciidamadooda dambiya dagaal ay geysteen, balse wuxuu qirtay diyaaradaha aan duuliyaha laheen iney duqeyn la beegsadeen koox gaari sii galayo.
Xaaladda xabbad joojinta waa sidee?
Xabad joojin cusub oo uu Mareykanka soo hindisay ayaa lagu waday inay ka dhaqan gasho ciidamada Armenia iyo Azerbaijan oo ku dagaallamaya dhulka lagu muransan yahay ee Nagorno-Karabakh.
Wadahadallada Washington kaddib , Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay sheegtay in labada dhinacba ay isku raaceen in la dhaqan geliyo loona hoggaansamo xabbad joojin cusub laga billaabo siddeeda subaxnimo waqtiga maxaliga ah.
Laba xabbad-joojin oo horay u dhexmartay labada dal ayaa burburay iyadoo Dagaalkana uu cirka isku shareeray ka hor heshiiska.
Weriye ka tirsan BBC-da oo ku sugan gobolkaas ayaa sheegay in weli uu dagaal ka socdo dhammaan jiidaha hore.
Ku dhawaaqidda heshiiskan xabbad joojinta ah ee cusub ayaa imanaya ka dib wadaxaajoodyo dhemaray Wasiir ku xigeenka Arrimaha Dibadda Mareykanka Stephen Biegun, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Armenia iyo dhigiisa Azerbaijan Jeyhun Bayramov.
Dhanka kale Jimcihii, labada wasiir ayaa waxay Washington kula kulmeen Xoghayaha Guud ee Arrimaha Dibadda Mareykanka Mike Pompeo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u hambalyeeyay dhammaan dadkii ka qeyb qaatay heshiiska xabbad joojinta.
Tani iyo inta ay dagaalladu ka billowdeen dhulka buuraleyda ee Nagorno-Karabakh waxaa ku dhintay kumannaan qof oo shacab u badan oo labada dal ka soo jeedo, halka ay kumannaan qofna guriyahooda ka qaxeen.